Kumaa ahaa Sutherland MacDonald, oo ahaa farshaxamiistaha reer Victoria? | Tattoo
Kumaa ahaa Sutherland MacDonald, oo ahaa farshaxamiistaha reer Victoria?
La taariikhda tattoos waa si hodan hodan ah oo xiiso leh. Cunsur guud oo ka mid ah dhaqammo badan, Galbeedka waxaa ka mamnuucay diinta, iyo kuwo kale, inkasta oo waqtiga la soo dhaafay ay soo noqotay, iyo xoog, iyadoo ay ugu mahadcelinayaan hormoodyada sida Sutherland MacDonald.
Waxaa lagu aasaasay London intii lagu jiray qayb ka mid ah qarnigii XNUMXaad iyo XNUMXaad, Sutherland MacDonald wuxuu caan ku noqday inuu ka mid noqdo dadka ugu horreeya ee leh dukaanka tattoo. Haddii aad rabto inaad ogaato sheekadiisa, sii wad akhriska!
1 Farshaxankii ugu horreeyay ee reer Fiktooriya ah
2 Hormood la xuso
Farshaxankii ugu horreeyay ee reer Fiktooriya ah
Wax yar baa laga yaqaanaa Sutherland MacDonald ka hor inta uusan dhisin dukaankiisa tattoo-ga ee 76 Jermin Street ee London. Farshaxanyahankan ayaa la sheegay inuu markii ugu horreysay xiriir la sameeyay tattoos-yadii 1880-meeyadii, xilligaas oo uu MacDonald ka tirsanaa ciidanka Ingiriiska.
Si kastaba xaalku ha ahaadee, istuudiyaha istiraatiijiyadiisa ayaa ahaa kii ugu horreeyay ee laga diiwaan geliyo Ingiriiska. Isagu wuxuu ahaa kii soo saaray qaybta tattoo bogagga hurdiga ah (Xaqiiqdii, waxay ahayd in si gaar ah loogu abuuro isaga, maxaa yeelay ma jirin cid kale oo adeegyadiisa ku bixisa magaalada oo dhan). Sidaa darteed, waxaa la ogyahay in istuudiyahiisu albaabada loo furay 1889.
Hormood la xuso
Si dhakhso leh Sutherland MacDonald wuxuu noqday caan. Waxaa la sheegay inuu sawiray boqoro badan iyo dad muhiim ah, sida boqorka Danmark iyo boqorka Norway ama qaar ka mid ah carruurta boqoradda Victoria (waagaas, bilawgii qarnigii XNUMXaad, waxay u ahayd moodo in boqorradu ay sawiro) ....
Sidoo kale, farshaxanyahankan Tattoo-ka ah ayaa aad uga shaqeeyay farshaxankiisa si uu naftiisa u horumariyo. Tusaale ahaan, inkasta oo markii ugu horreysay uu gacan ku sameystay tattoos, 1894-kii wuxuu u wareegay mid ka mid ah mashiinnada ugu horreeya ee tattoo-ga ah, oo iskiis u shatiyeeyay. Dheeraad ah, Wuxuu ka mid ahaa fanaaniintii ugu horraysay ee soo bandhigta midabyo cusub nashqadihiisa, buluug iyo cagaar..
Sutherland MacDonald wuxuu shaqeeyey in ka badan afartan sano oo uu ahaa farshaxan tattoo ah, isagoo farshaxankiisa ku daabacay dhammaan noocyada maqaarka. Noo sheeg, ma ogeyd sheekada farshaxankan sawirada ah? Xusuusnow inaad noo dhaafto faallo!
Wadada buuxda ee maqaalka: Tattoo » Tattoos » Fanaaniinta Tattoo » Kumaa ahaa Sutherland MacDonald, oo ahaa farshaxamiistaha reer Victoria?
Tattoos Filibiin, Igorot iyo rinji
Tattoos Qalbi Dhab Ah